Mosis na Erọn gakwuuru Fero (1-5)
E mesikwuru ndị Izrel ike (6-18)
Ndị Izrel tawara Mosis na Erọn ụta (19-23)
5 Mgbe e mechara, Mosis na Erọn gakwuuru Fero, sị ya: “Jehova bụ́ Chineke Izrel kwuru, sị, ‘Hapụ ndị m ka ha gaa meere m ememme n’ala ịkpa.’” 2 Ma Fero sịrị: “Ònye bụ Jehova,+ nke mere m ga-eji rubere ya isi wee hapụ ndị Izrel ka ha gawa?+ Amaghị m onye Jehova bụ, agaghịkwa m ahapụ ndị Izrel.”+ 3 Ma ha sịrị: “Chineke ndị Hibru gwara anyị okwu. Biko, anyị chọrọ ịga n’ala ịkpa, n’ebe ga-ewe anyị ụbọchị atọ iru, ka anyị chụọrọ Jehova bụ́ Chineke anyị àjà.+ Ma ọ́ bụghị ya, ọ ga-eji ọrịa ma ọ bụ mma agha gbuo anyị.” 4 Eze Ijipt zara ha, sị: “Mosis na Erọn, gịnị mere unu ji na-akpọpụ ndị a n’ọrụ ha na-arụ? Gaghachinụ n’ọrụ unu!”+ 5 Fero sịkwara: “Lee otú ndị a si dị ọtụtụ n’ala a, unu abịa ịkpọpụ ha ka ha kwụsị ọrụ ha na-arụ.” 6 N’ụbọchị ahụ, Fero nyere ndị na-ekenye ndị Izrel ọrụ nakwa ndị isi ọrụ ha iwu, sị: 7 “Unu enyezila ndị Izrel ahịhịa ọka ha ji akpụ brik.+ Ha gawa kpokọtawara onwe ha ahịhịa ọka. 8 Ma, unu ka ga na-amanye ha ka ha na-akpụ brik ole ha na-akpụbu. Unu esepụrụla ha ihe ọ bụla na ya n’ihi na ha dị umengwụ. Ọ bụ ya mere ha ji na-ebe ákwá, sị: ‘Anyị chọrọ ịla. Anyị chọrọ ịchụrụ Chineke anyị àjà!’ 9 Meenụ ka ha rụsikwuo ọrụ ike, ka ha na-arụ ọrụ mgbe niile, ka ha wee ghara ige okwu ụgha.” 10 Ndị na-ekenye ha ọrụ+ na ndị isi ọrụ ndị Izrel gaziri gwa ndị Izrel, sị: “Fero kwuru, sị, ‘Agaghịzi m enye unu ahịhịa ọka. 11 Gaanụ kpokọtawara onwe unu ahịhịa ọka n’ebe ọ bụla unu nwere ike ịchọta ya. Ma a gaghị ebelatara unu ọrụ unu na-arụ.’” 12 Ndị Izrel wee gaa ebe niile n’ala Ijipt ka ha kpokọta okporo ọka ha ga-eji emere ahịhịa ọka. 13 Ndị na-ekenye ha ọrụ nọkwa na-agwa ha, sị: “Onye ọ bụla n’ime unu ga-arụcharịrị ọrụ ya kwa ụbọchị, otú ọ na-arụ mgbe a na-enye ya ahịhịa ọka.” 14 Ndị Fero mere ndị isi ọrụ pịakwara ndị ha họpụtara ka ha bụrụ ndị isi ọrụ ndị Izrel ihe.+ Ha jụrụ ha, sị: “Gịnị mere na unu akpụzughị brik ole unu na-akpụbu? Unu akpụzughị ya ma ụnyaahụ ma taa.” 15 Ndị isi ndị Izrel wee gakwuru Fero, kpesara ya, sị: “Gịnị mere i ji emeso ndị ohu gị otú a? 16 A naghị enye ndị ohu gị ahịhịa ọka. Ma ha na-asị anyị, ‘Kpụọnụ brik!’ A na-apịa ndị ohu gị ihe. Ma, ọ bụ ndị obodo gị ka ụta dịịrị.” 17 Ma ọ sịrị: “Unu dị umengwụ! Unu dị umengwụ!+ Ọ bụ ya mere unu ji asị, ‘Anyị chọrọ ịla. Anyị chọrọ ịchụrụ Jehova àjà.’+ 18 Ngwa, gaanụ rụwa ọrụ! A gaghị enye unu ahịhịa ọka. Ma unu ka ga na-akpụ brik ole unu na-akpụbu.” 19 Ndị isi ọrụ ndị Izrel wee hụ na ha nọ ná nnukwu nsogbu n’ihi iwu ahụ e nyere, sị: “Unu esepụla ihe ọ bụla na brik ole unu na-akpụbu kwa ụbọchị.” 20 Mgbe e mechara, ha bịakwutere Mosis na Erọn, bụ́ ndị guzo n’ebe ahụ ka ha zute ha mgbe ha hụchara Fero na-apụta. 21 Ozugbo ahụ, ha sịrị ha: “Ka Jehova hụ ihe unu mere ma kpee unu ikpe, ebe ọ bụ na unu emeela ka Fero na ndị na-ejere ya ozi kpọọ anyị asị.* Unu enyekwala ha mma agha ka ha gbuo anyị.”+ 22 Mosis wee gwa Jehova, sị: “Jehova, gịnị mere i ji mekpaa ndị a ahụ́? Gịnị mere i ji zite m? 23 Malite n’oge m gara n’ihu Fero ịgwa ya okwu n’aha gị,+ o mesikwuola ndị a ike,+ ị napụtabeghịkwa ndị gị.”+
^ Ma ọ bụ “unu emeela ka anyị siwe Fero na ndị na-ejere ya ozi ísì ọjọọ.”